ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန်အတွက် Orad ၏ Video Wall Solutions ကို Web-based Configurator Tool ဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Orad ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအမှတ်တရ Solutions Now ကိုတိုးမြှင့်စွမ်းရည်များအတွက် Web-base configuration Tool ကိုအတူ Enhanced
Orad ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအမှတ်တရ Solutions Now ကိုတိုးမြှင့်စွမ်းရည်များအတွက် Web-base configuration Tool ကိုအတူ Enhanced
ဇန်နဝါရီလ 27, 2015 - ယနေ့ Orad ယင်း၏ဗီဒီယိုကမြို့ရိုးကိုဖြေရှင်းချက်အော်ပရေတာတစ်ဦးကို web browser ကနေသူတို့ရဲ့ HDVG ကဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုအချက်ပြမှုများ၏အဆင်အပြင်ဖန်တီးသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုတဲ့ Layout Configuration နှင့်အတူတိုးမြှင့်ခဲ့ကြကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအပြောင်းအလဲများဒီတော့အားလုံးပြောင်းလဲမှုများကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် updated နေကြသည်။
အဆိုပါ Layout Configuration ထုတ်လုပ်မှု၏မည်သည့်အမျိုးအစားအတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအပြင်အဆင်များအမြန် setup ကိုနှင့် configuration ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အလွယ်တကူစတူဒီယိုမြို့ရိုးကို configurations တွေနဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှသောခက်ခဲရှုထောင့်အချိုးများနှင့်အစီအစဉ်များကိုလိုက်လျောညီထွေခြင်း, Layout Configuration အဆိုပါ display ကိုရန် HDVG4 ကနေပေးပို့ထားကြောင်းအဆိုပါအချက်ပြမှုများ၏နေရာချထားခြင်းနှင့်တိမ်းညွှတ်ညှိနိုင်ပါတယ်။ built-in အရောင် correctors တစ်ခုချင်းစီကို output ကိုများအတွက်ထရံကိုသူ့ဟာသူပေါ်စျေးကြီးပြင်ပစနစ်များသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချိန်ညှိမလိုဘဲမြို့ရိုးပေါ်မှာအကြောင်းအရာ၏အသွင်အပြင်ကိုထိန်းချုပ်ကူညီပေးသည်။
အဆိုပါ Orad HDVG4 ကဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုပလက်ဖောင်းကဲ့သို့တူညီသောကွန်ယက်ပေါ်တွင်မည်သည့် PC ကွန်ပျူတာကနေလက်လှမ်းတစ်အသုံးပြုသူရိုးရှင်းစွာတစ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အဆင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက် HDVG ချိတ်ဆက်။ နယူးအပြင်အဆင်လျင်မြန်စွာသော်လည်းကောင်းခြစ်ရာကနေဖန်တီး, ဒါမှမဟုတ်ရှိပြီးသား layout ကိုအပေါ်မှာအခြေခံနိုင်ပါသည်။
RenderEngine ပြေးနေသည်အခါ Layout Configuration ထဲကသယ်ဆောင်အားလုံးစစ်ဆင်ရေးတိုက်ရိုက်အမှုကိုပြုနေကြသည်။ အသုံးပြုသူကိုဖန်ဆင်းလျက်ရှိသည်, မရှိသည့်စနစ်ပြန်လည်စတင်သည်လိုအပ်သည်သောအပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ချက်ရှိပါတယ်။ Layout များတူညီသည့်စနစ်ကွဲပြားခြားနားသောမြို့ရိုးအပြင်အဆင်နဲ့ချိတ်ဆက်သောဖြစ်ရပ်အတွက်ဘဏ်ဍာအကြား switched နိုင်ပါသည်။
PowerWall အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး: www.orad.tv/product/studio/powerwall.
Orad မင်္ဂလာပါ-Tec စနစ်များအကြောင်း
Orad မင်္ဂလာပါ-Tec စနစ်များဂရပ်ဖစ်, ဗီဒီယိုဆာဗာများနှင့်သတင်းများ, ရုပ်သံလိုင်းအမှတ်တံဆိပ်, အားကစားထုတ်လုပ်မှုနှင့်တိုးမြှင့်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်အထူးဖြစ်ရပ်များ, ကို virtual စတူဒီယိုနှင့်ကို virtual ကြော်ငြာအပါအဝင်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ထုတ်လွှင့် Real-time 3D ၏လောကဓာတ်-ဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ Orad ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုဖြေရှင်းနည်းများ, ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာချောမွေ့ကြည့်ရှုသူအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ 1993 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Orad အဆိုပါ Frankfurt စတော့အိတ်ချိန်း (OHT) ရက်နေ့တွင်စာရင်းအများပြည်သူကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.orad.tv/.
Orad မင်္ဂလာပါ-Tec စနစ်များ, Ltd
RTV ဆလိုဗေးနီးယားမှ Dalet နှင့်ပူးပေါင်းမှုအားတိုးချဲ့ရန်အဆုံးမှအဆုံးသို့သတင်းများရေဒီယိုနှင့်တီဗီအတွက် Dalet Galaxy XNUMX နှင့်အသွင်ပြောင်းရန် - မေလ 27, 2020
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ HDVG4 layout configuration ORAD ဗီဒီယိုကို Rendering 2015-01-28
ယခင်: ခေတ်သစ် VideoFilm ရွှေကမ္ဘာလုံးအမည်စာရင်းတင်သွင်းအတွက် "အသက်စာစောင်" အရောင်တန်းနှင့်အယ်ဒီတာ့အာဘော်န်ဆောင်မှုများပေး
နောက်တစ်ခု: ဆက်သွယ်ရေးရယူ RGB ကွန်ယက်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်